Isibonelelo se-NC leveler,China Isibonelelo se-NC leveler Supplier & Manufacturer
Inkcazo:I-NC leveler iyondla, I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeAdoves, Cradle ngqoener feeder,Ukuhamba ngokungasebenzi kwilayini engenanto,Ukuphakama kwinqanaba lokutyisa,Cofa kwigumbi le-NC Leveler Feede
Home > Imveliso > Umxhasi weCoil Straightener > Isibonelelo se-NC leveler
Iintlobo zeMveliso ze- Isibonelelo se-NC leveler , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-NC leveler iyondla , I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeAdoves ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
3 Kwi-1 Directener feeders  Qhagamshelana Ngoku
I-NC Servo Straightener feeders zoShishino lweemoto  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi we-coil Straightener wesibonelelo sokuGxibha uMgca  Qhagamshelana Ngoku
Umncedisi weservo ngqoener & isixhasi  Qhagamshelana Ngoku
Iinkqubo zokuZondla ngokuKhangela ngokuZenzekelayo koomatshini bokushicilela  Qhagamshelana Ngoku
Isibonelelo seNC seNveler soKwenziwa ziitampu zeZinto zeKhaya  Qhagamshelana Ngoku
I-Straightener kunye nee-feeders zezinto zensimbi  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi we-Uncoiler Leveler wesitampu sebhanti  Qhagamshelana Ngoku
Umtya we-coil strips  Qhagamshelana Ngoku
I-NConder Straightener kunye ne-Uncoiler 3 kwi-1  Qhagamshelana Ngoku
I-Decoiler Cum Straightener kunye neServo Feeder  Qhagamshelana Ngoku
Ukukhohlisa ukujonga ngokuthe tye kunye neLayini engenanto  Qhagamshelana Ngoku
Cinezela ireder yokutyisa  Qhagamshelana Ngoku
Ukuprinta I-3 kwi-1 feeder  Qhagamshelana Ngoku
Ukucinezelwa kwamandla kwiNC Servo 3 Kwi-1 feeder  Qhagamshelana Ngoku
3 Ku-1 indawo ethe ngqo uMxhasi nge-Decoiler  Qhagamshelana Ngoku
Strip Metal Uncoiler feeder  Qhagamshelana Ngoku
3 Kwinto e-1 ethe tye kunye noMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
I-CNC Straightener yoMxhasi we-Uncoiler Servo 3 kwi-1  Qhagamshelana Ngoku
Umgca we-Press ozenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
Umatshini weServo Feeder ongafumaneki  Qhagamshelana Ngoku
3 Kwi-1 Directener feeders
3 KWI-1 STRAI GHTENER FEEDERS UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
I-NC Servo Straightener feeders zoShishino lweemoto
I-NC SE RVO STRAI GHTENER FE EDERS F F AU A INDAWO YOKUZIPHATHA UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani...
Umxhasi we-coil Straightener wesibonelelo sokuGxibha uMgca
CO IL STRAightENER FEED ER YOKUTHENGA I-PRES STA MPING LINE UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani...
SERVO STRA IGHTENER ZIFIZI DER & DE COILER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule...
ISIQINISEKISO SESIFUNDO SESIFUNDO SOKUFUNDA IINDLELA ZOKUTHENGA IZIFUNDO UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani...
INQANABA LESIQINISELEKILEYO LOKUQWALASELWA KOKUFAKWA KWE-APPL YASEKHAYA UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani...
Ngogesi STRAIGHTENER A ND FOR M ETAL NGEEKHOMPONENTI UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu...
ISIQINISEKISO SENKQUBO YOKUQHELANISELWA KWEXESHA LOKUGQIBELA UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani...
ICOIL STR IPS IPHEPHA IXESHA UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
I-NC FEED ER STRAIGHTENER kunye ne-UNCOI LER 3 KWI-1 UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu...
I- DECO ILER CU M STRAIG HTENER kunye ne-SE RVO FEEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu...
UKUKHETHA I-STRAI GHTENING NE-BLA NKING LINE UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule...
PR ESS STRAightENER F EEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
UKUTHENGA I-PRESS 3 KWI-1 FEEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
AMANDLA PR ESS NC SER VO 3 KWI-1 FEEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule...
3 KWI-1 STRAI GHTENER FEED ER NGE-CO COILER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule...
STRIP ME TAL UNCO ILAY FEEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
3 KWI-STRAIG HTENER & FEEDER UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha...
I-CNC STRAIGH TENER FEE DER UNcoI LER COO 3 KWI-1 UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu...
I-AUTOMA TIC PRE SS LINE UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule bokwakha oomatshini...
SERVO IMALI DER zin ILER LEV ELER KOMATSHINI UMayflay ubonelela ngeendlela ezininzi zezisombululo ezigubungela zonke iimfuno zentengiso kumzi mveliso wokwenza isinyithi kunye nomzi mveliso wesinyithi weshiti. Inkampani yinkampani enkulu enobuchule...
KwiChina Isibonelelo se-NC leveler Abaxhasi
Umatshini wokuphakisha we-NC leveler lolunye uhlobo lwezixhobo zokubamba ikhoyili, isetyenziselwa ukukhulula kunye nokulinganisa imitya ye-coil kunye nokondla kumatshini wokushicilela wokushicilela, umatshini wokuqokelela, umatshini we-CNC lathe, umatshini wokucheba.
I-feed leveler ye-NC ayisihlanganisi nje kuphela ngokulula, i-straightener, kunye ne-feeder, kodwa ikulawulo oluhlanganisiweyo ekusebenzeni. Isikhululo se-hydraulic, imoto ye-coil, imoto engafakwanga i-injini, ispindle kunye ne-inverter, icandelo le-straightener, i-servo feeder inxibelelana nenkqubo yemodyuli ye-PLC kwaye ilawulwa sisikrini esinye sokucofa, esikukulungele ukuqhuba kwabaqhubi.
Iyakwazi ukuphatha i-iron enamandla aphezulu kunye nentsimbi eqhelekileyo kubukhulu obukhulu. Iyakwazi ukujongana nobukhulu bentsimbi ukuya kuthi ga kwi-12,0mm ububanzi bekhoyili ukuya kuthi ga kwi-1800mm ngentsebenzo ethe tye yokulungelelanisa. Umxokelelwano wokutya wecoil we-compact decoiler ocacileyo uyimfuneko ekuqiniseni isinyithi esinyithi kwimoto, eyokwakha, iredisi okanye isixhobo sombane esenza isixhobo.
I-NC leveler feeder kulula ukuyifaka, enokungena kwimveliso yobuninzi ngexesha elifutshane. Ngaphandle kokuphamba okude kwezinto, ubude bomtya okondla i-coil buhlala bungabikho ngaphezulu kwe-5m, ezinye iimodeli ezinje ngeMFL2 kuphela ubude be-2.5m, eya kuthi isindise indawo yokusebenza yegumbi loku stamp. Ngezinto eziphambili zophawu lwamazwe aphesheya, inkqubo ye-othomathikhi ezenzekelayo kunye neenkqubo zokuzihlola, umgca wokuhambisa i-compil coil unesantya esiphantsi kakhulu sokusilela kunye nokugcinwa kulula.
NC Umatshini esilinganayo feeder ilungele ukuba ngemoto sokunyathela, izixhobo zombane yokuvelisa, ikhompyutha kunye nezombane, hardware kunye namalungu yesinyithi etc shishino. Icandelo leZithuthi: I-Bracket, iDamper, iBarke Pad, iThaveni yeTie, iiFesi zoMbane, iiShell zeePrinta, isakhelo seKhompyuter, iSalide Rail of Seat Car, Splash Shield of body car and etc.
I-NC leveler iyondla I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeAdoves Cradle ngqoener feeder Ukuhamba ngokungasebenzi kwilayini engenanto Ukuphakama kwinqanaba lokutyisa Cofa kwigumbi le-NC Leveler Feede I-NC leveler feed I-NC Leveler Feeding